Sierra Leone neGuinea | Bhuku Regore ra2014
ANENGE makore 500 apfuura, pedyo nepanotangira rwizi runonzi Sierra Leone, nhondo yemuti unobereka vana vanenge donje yakamera uye yakatanga kukura. Kwemakore 300 muti uyu pawaikura midungwe yevanhu vakasuruvara zvikuru yaipfuura nepauri. Vanhu vane utsinye vaitengesa varanda vakaendesa varume, vakadzi nevana vanenge 150 000 kumisika yevaranda yaiva mhiri kwemakungwa.
Muti unozivikanwa zvikuru weCotton Tree wemuFreetown
Musi wa11 March 1792, mazana evaranda akasunungurwa kubva kuAmerica akaungana pasi pemuti uya unonzi Cotton Tree kuti apemberere kudzorerwa kwavo kuAfrica. Musi iwoyo vakavamba guta rinonzi Freetown, zvichiratidza tarisiro yavaiva nayo. Varanda vakanga vasunungurwa vakaramba vachiuya kusvikira nzvimbo yacho yava kugarwa nemadzinza anopfuura 100 evanhu vomuAfrica. Vagari vatsva ava vakatanga kushandisa Cotton Tree sechiratidzo chorusununguko netariro.
Kwemakore anenge 100, Zvapupu zvaJehovha muSierra Leone zvave zvichinyaradza vavakidzani vazvo netariro yerusununguko rwakatokura zvikuru—“rusununguko runobwinya rwevana vaMwari.” (VaR. 8:21) Rusununguko urwu runoreva kusunungurwa pauranda hwechivi nerufu, Umambo hwaMwari hunotungamirirwa naMesiya pahuchaunza rugare hwoita kuti nyika ive Paradhiso.—Isa. 9:6, 7; 11:6-9.
Mumakore 50 apfuura, bazi reZvapupu zvaJehovha muSierra Leone rave richitarisirawo basa rokuparidza muGuinea. Nyika iyi yayakavakidzana nayo yave iine matambudziko ezvematongerwo enyika, ekurarama kwevanhu, uye ezveupfumi, zvichiita kuti vakawanda vevagari vemo vagamuchire shoko reBhaibheri rinokurudzira.
Zvapupu zvaJehovha muSierra Leone neGuinea zvakazivisa mashoko akanaka pasinei nezvipingamupinyi zvakawanda. Izvi zvinosanganisira kuoma kweupenyu, urombo hwakanyanyisa, kuwanda kwevanhu vasina kudzidza, tsika dzakadzika midzi, kusawirirana kwemadzinza uye kurwisana kwakaipisisa. Nyaya inotevera inopa uchapupu hwekutenda uye kuzvipira kusingazununguki kwevashumiri vaJehovha ava vakavimbika. Tinovimba kuti nyaya yavo ichakusvika pamwoyo yosimbisa kutenda kwako muna “Mwari anopa tariro.”—VaR. 15:13.
Dzidza zvakawanda nezvenyika idzi, vanhu veko, zvitendero uye mitauro.
Muna 1915, mushumiri waJehovha wokutanga ainge akabhabhatidzwa akasvika muFreetown. Vakawanda vaifarira Bhaibheri.
Vafundisi vakanga varonga kuita kuti vanhu vaMwari vanyarare, asi Jehovha akanga ‘aita kuti mabasa avo akaipa avadzokere.’
Ungano yeFreetown yaka“batikana kwazvo nokuparidza shoko.”
Kaviri pavhiki Zachaeus Martyn aifamba makiromita masere, achikwira nokudzika gomo, kuti anopinda misangano yeZvapupu zvaJehovha. Chii chakaita kuti ave nechokwadi chokuti ainge awana chokwadi cheBhaibheri?
William R. Brown akaparidzira muCaribbean Islands yose uye muWest Africa. Dzidza kuti nei aiona sokuti aiva neimwe yeropafadzo dzakakura pane dzose dzingawanikwa nomunhu.
Basa rokuparidza raizoitwa nevakawanda. Mamishinari akatumwa kuti akurudzire basa.
Muna 1956, firimu rinonzi The New World Society in Action rakaratidzwa muFreetown Sierra Leone. Pane vaizombouya kuzoriona here?
Zvapupu zvaJehovha zvinozivikanwa zvikuru muSierra Leone neGuinea sevanhu vanokudza wanano.
Nei vezvematongerwo enyika vePoro vakaendesa chikumbiro kuParamende chekurambidza basa reZvapupu zvaJehovha?
Mapoka epachivande akawanda kuWest Africa anoitei paupenyu hwevarume nevakadzi?
Kuti dzibatsire vamwe kufambira mberi mune zvokunamata, ungano dzaiita makirasi ekudzidza kuverenga nokunyora. Vanhu vakawanda zvavakadzidza kuverenga, kukosha kwekuti zvinyorwa zvishandurwe kwakawedzera.
Vanhu vainge vasina magwaro okufambisa akakodzera, kana kuti pasipoti, vaipfuura sei pabhodha vachipinda muGuinea kuti vanopinda gungano?
Jay Campbell, akaremadzwa neporiyo, aida kupinda chidzidzo cheBhaibheri cheUngano. Akati aizoenda ikoko achifamba nezvimapuranga zvake zvokufambisa. Akakwanisa kuita kudaro here?
Pasinei nehondo, zvinhu zvekuyamura uye nyaradzo inobva kuna Mwari zvakapiwa kuZvapupu nevamwewo vanhu. Chii chakavabatsira kuratidza simba neushingi?
Hondo payaitsviriridza, Zvapupu zvaJehovha ‘zvakaramba zvichidzidzisa nokuzivisa mashoko akanaka zvisingaregi.’
Musoja wechidiki wevapanduki aiyeuka kugamuchirwa neushamwari kwaakaitwa paakapinda musangano weZvapupu zvaJehovha. Chii chakaita kuti achinje mararamiro ake?
Vanhu pavaiurayana vachiita mhirizhonga muPendembu, nei Zvapupu zvakati kuti zvisina kuurayiwa pakatanga hondo muna 1991?
Mumwe weZvapupu zvaJehovha aiita basa rekutakura zvinhu munguva yehondo. Aikwanisa sei kutakura tsamba nezvinhu kubva kuFreetown achienda nazvo kuConakry, kuGuinea?
Tamba Josiah aishanda mumigodhi yemadhayamondi asati ava mumwe weZvapupu zvaJehovha. Nei achiona sokuti akawana chimwe chinhu chiri nani pane madhayamondi?
Hondo yevagari vemo yapera, ungano dzakaumbwa, Dzimba dzoUmambo dzakavakwa, uye mapiyona chaiwo akaendeswa kwaiva neZvapupu zvishoma.
Nhasi, Zvapupu zvaJehovha munyika mbiri idzi zvine chokwadi chokuti vamwe vanhu vakawanda vachateerera mashoko akanaka oUmambo vova Zvapupu.
Phillip Tengbeh nomudzimai wake vakatiza kuti vapone masoja evapanduki paairwisa dhorobha ravaigara reKoindu. Vakabatsira kuvaka Dzimba dzoUmambo shanu pavaigara mumisasa yevapoteri.
Cindy McIntire akashumira semumishinari muAfrica kubva muna 1992. Anotaura kuti nei achinyanya kunakidzwa nokuparidza muSierra Leone.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Sierra Leone neGuinea
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Bhuku Regore reZvapupu zvaJehovha ra2014